लकडाउनभन्दा अगावैदेखि बन्द रहेका सिनेमा हल यही पुष १० गते शुक्रवारबाट सञ्चालनमा आउँदैछन् । सरकारले सिनेमा हल खोल्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरे पनि हल व्यवसायीहरु शुक्रवारबाट सिनेमा हल खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई वेवास्था गरेको भन्दै गएको हप्ता नेपाल चलचित्र संघले पुष १० गतेबाट सिनेमा हल खोल्ने स्वःघोषणा गरेको थियो ।
गत वर्षको चैत्रयता बन्द रहेका फिल्म हलहरु खुल्न लागेका हुन । फिल्म रिलिजका लागि अहिले अधिकांश हलले आन्तरिक तयारी गरिसकेको नेपाल चलचित्र संघले जनाएको छ । अहिले हल सञ्चालकहरु १० महिनादेखि बन्द रहेको सिनेमा हलको सरसफाइमा जुटेका छन् । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सिनेमा हल खोल्न लागिएको हो । हल सञ्चालकले ५० प्रतिशत दर्शक राखेर सिनेमा हल चलाउँदैछन् । सरकारले सिनेमा हल बन्द गर्न बल प्रयोग गरे गिरफ्तारी दिन तयार रहेको हल व्यवसायीले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको फिल्म हल खुल्दा पहिले कुन फिल्म रिलिज होला त ? सबैको चासोको विषय अहिले यही रहेको छ । नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मा भोलिबाट पुरानै फिल्म ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ लगाउने तयारी रहेको बताउँछन् । तत्काल सिनेमा घरमा दर्शकको चाप नहुने भएका कारण हलमा प्रदर्शन भइसकेका फिल्म पुनः चलाउन लागेको शर्मा बताउँछन ।
‘कोरोनाको कारणले लकडाउन हुन अगाडि रिलिज भएको फिल्म ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’नै हल खुल्दा लाग्ने पहिलो फिल्म हो’ शर्माले भने, ‘एक दुईटा अंग्रेजी फिल्म पनि आउन सक्छ ।’ ‘आमा’, ‘सेन्टिभाइरस’ र ‘छक्का पन्जा ३’ पहिलो चरणमा लगाउने सोच संघले बनाएको भएपनि ‘छक्का पान्जा ३’ हिजोबाट युट्युवमा आएकोले दुई नेपाली फिल्म मात्र रिलिज गर्न लागिएको शर्माको भनाइ रहेको छ । मल्टीप्लेक्समा भने यी दुई नेपाली फिल्मसँगै हलिउड फिल्म ‘मुलान’ र ‘ब्लडसट’ प्रदर्शन हुँदैछन् ।
समीक्षात्मक र व्यवसायिक दुवै रुपमा सफल ठहरिएको ‘आमा’ लाई दीपेन्द्र के. खनालले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा सुरक्षा पन्त र मिथिला शर्माको मुख्य भूमिका छ । फिल्म पुनः प्रदर्शन हुने भएपछि निर्माण टिम उत्साहित देखिएको छ । त्यस्तै, रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ मा सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, दयाहाङ राई, सन्दिप क्षेत्रीलगायतको अभिनय छ ।